दाह्रीजुँगा पाल्नुको फाइदै फाइदा !
काठमाडौँ, २२ असोज । हाम्रा पुर्खा र ऋषिमुनिले त्यसै दाह्री पालेका होइन रहेछ । दाह्रीजुँगा बढेको छ र काट्न लाग्नु भएको छ ? एक पटक सोच्नुहोस् । धेरै पुरुष दाह्रीजुँगाको भारी बोक्न चाहँदैनन् । अनुहारमा दाह्रीजुँगा उम्रिन थालेपछि धेरैले खौरिहाल्छन् । हाई पर्सनालिटीका लागि पनि दाह्रीजुँगा फालेर चिटिक्क पर्नुपर्ने धेरैको बुझाइ छ । दाह्रीजुँगा नखौरिनुलाई अल्छीपनको संज्ञा पनि दिने गरिन्छ । तर, दाह्री पाल्दाका केही महत्त्वपूर्ण फाइदा छन्, जे दाह्री काट्नेले गुमाइरहेका छन् ।